Ny zoma 21 septambra lasa teo, tamin’ny 5 ora maraina izy no niala tao an-tokantranony ary nilaza ny hamonjy trano fivoahana, raha ny fanazavan-dreniny. Tsy hita intsony anefa izy taorian’izay sady tsy nandrenesam-baovao ihany koa. Zazalahy tsy mahatadidy firy izay i Luciano noho ny aretina mahazo azy. Tsy dia miteny loatra ihany koa izy raha tsy sitrapony, antony tena mampitebiteby fatratra ireo nahitany masoandro. Nomarihin’ny renin’i Luciano fa tsy nisy ady na fifandirana teo amin’izy ireo tamin’io andro io. Ny hany nisy dia izay tsy fahasalamany izay. Efa nampandre ny fokontany sy ny mpitandro ny filaminana moa izy ireo saingy tsy mbola nisy vaovao tena nivaingana hatreto. Tsiahivina fa mirefy 1m65 i Luciano ary misy tandra napetaka eo amin’ny tarehiny. Afaka mifandray mivantana amin’ny laharan-tariby 034 48 876 09 izay mety mahita an’i Luciano na manam-baovao momba ity zazalahy ity.